Tapakilan'ny fiaran-dalamby CFL mora vidy sy ny vidin'ny dia | Save A Train
Tapakilan'ny fiaran-dalamby CFL mora vidy sy ny vidin'ny dia
an-trano > Tapakilan'ny fiaran-dalamby CFL mora vidy sy ny vidin'ny dia
Eto ianao no afaka mahita ny fampahalalana rehetra momba Tapakilan'ny fiaran-dalamby CFL mora vidy SY Vidin'ny fitsangatsanganana CFL ary tombony.
Lohahevitra: 1. CFL avy amin'ny Soritr'asan'ny Train
2. Momba ny CFL 3. Topy hevi-dehibe hahazoana tapakila fiaran-dalamby CFL mora vidy
4. Ohatrinona ny vidin'ny tapakila CFL 5. Lalana fitsangatsanganana: Fa maninona no tsara kokoa ny mampiasa lamasinina CFL, ary tsy mandeha amin'ny fiaramanidina
6. Inona avy ireo fahasamihafana misy eo amin'ny fotoana fohy, ary Tickets Day amin'ny CFL 7. Misy famandrihana CFL ve
8. Hafiriana alohan'ny fiaingan'ny CFL dia mila tonga aho 9. Inona ny fandaharam-potoanan'ny lamasinina CFL
10. Iza amin'ireo gara no aroson'ny CFL 11. FAQ CFL
CFL avy amin'ny Soritr'asan'ny Train
Miaraka amin'ny tahan'ny mari-pahaizana ambony amin'ny 96%, CFL (Ny orinasam-pifamoivoizana ofisialy Luxembourg) dia iray amin'ireo mpandraharaha azo antoka indrindra any Eropa.
Isan-taona, CFL maka 25 tapitrisa tapitrisa sy 105 entana an-tapitrisany taonina manerana ny toerana alehany ao Luxembourg sy eran'i Eropa.
CFL dia tena sariaka amin'ny tontolo iainana, CO2-maimaim-poana, SY 100% ny herin'izy rehetra dia avy amin'ny angovo azo havaozina.
CFL no mpanome tolotra fivezivezena lehibe indrindra any Luxembourg.
Momba ny CFL
CFL, Fiarahamonina nasionalin'ny lalamby Luxembourg, anarana iray hafa ho an'ny lalamby nasionaly Luxembourg. Hatramin'ny niorenany tao 1946, CFL dia nanolotra tolotra fivezivezena ho an'ny olom-pirenena Luxembourg.
Manolotra CFL serivisy fiaran-dalamby ao Luxembourg ary manerana an'i Eoropa. Miaraka amin'ny tapakila mety, azonao atao ny mitsidika ny tsara indrindra toerana fialan-tsasatra any Eropa. Miaraka amin'ny sokajy tapakila samihafa, Ny CFL dia miompana amin'ny filan'ny tsirairay.
Ny CFL dia manofana lalamby matetika, Luxembourg – Bruxelles, Luxembourg – Paris, Ettelbruck – Liege, Wasserbillig–Dusseldorf. Azonao atao ny mandeha any amin'ireo firenena mpifanolo-bodirindrina any Eropa amin'ny alàlan'ny lamasinina CFL: Frantsa, Alemaina, ary Belzika.
Manerana ny orinasa, 3,090 Miasa amin'ny lalamby ny mpiasa mba hahazoana antoka fa mpandeha an-tapitrisany no tonga soa aman-tsara any amin'ny toerana alehany isan'andro.
Mandeha Tehirizo ny tranokala fiaran-dalamby na ampiasao ity widget ity hikarohana azy manofana tapakila ho an'ny CFL:
Topy hevi-dehibe hahazoana tapakila fiaran-dalamby CFL mora vidy
isa 1: Fandriho mialoha ny tapakilan'ny CFL araka izay azonao atao
Ny vidin'ny Tapakilan'ny lamasinina CFL dia miakatra rehefa manakaiky ny andro fitsangatsanganana. Azonao atao ny manangona vola amin'ny alàlan'ny famandrihana ny tapakilan'ny fiaran-dalamby CFL any lavitra araka izay azo atao amin'ny andro fiaingana (ara-dalàna 3 volana mialoha no ambony indrindra). Ny famandrihana mialoha dia manome antoka fa hahazo ny tapakila fiaran-dalamby CFL mora indrindra ianao. Voafetra ihany koa ny isa, ka vao haingana ianao no manafatra, ny mora kokoa ho anao. Mba hamonjy ny vola amin'ny tapakilan'ny lamasinina CFL, amidy vao tapakilao.
isa 2: Mandehandeha amin'ny CFL mandritra ny fotoana tsy an-tampon'ny tampony
Toy ny isaky ny mpandraharaha ny lalamby, Ny tapakilan'ny lamasinina CFL dia mora kokoa mandritra ny fotoana tsy misy farany, amin'ny fiandohan'ny herinandro, ary mandritra ny andro. Afaka mahazo antoka ianao fa mahazo fiaran-dalamby mora kokoa tapakila ao anatin'ny herinandro. Amin'ny talata, Alarobia, sy Alakamisy, Ny tapakilan'ny fiaran-dalamby CFL no ekonomika indrindra. Noho ny habetsaky ny raharaham-barotra mpandeha mandeha miasa maraina sy hariva, Ny tapakilan'ny lamasinina dia mitaky lafo kokoa amin'ny ankamaroan'ny fotoana. Izy io dia mora kokoa ny mandehandeha amin'ny fotoana anelanelan'ny maraina sy ny hariva. Ny faran'ny herinandro dia fotoam-pitsarana hafa ho an'ny fiaran-dalamby, indrindra ny zoma sy ny asabotsy. Niakatra ihany koa ny vidin'ny tapakilan'ny lamasinina CFL ny fialantsasatra ary fetin'ny sekoly, ary mety haharitra ny fialantsasatry ny sekoly any Eropa 3 herinandro isaky ny mandeha.
isa 3: Mandefasa ny tapakilan'ny CFL rehefa azonao antoka ny fandaharam-potoanananao
Fiaran-dalamby CFL tena mitaky mafy, ary miaraka amin'ny fifaninanana kely, izy ireo amin'izao fotoana izao no mijanona ho safidy ambony indrindra amin'ny lamasinina any Luxembourg. Azon'izy ireo atao ny mametraka fameperana tapakilan'ny fiaran-dalamby toy ilay ananany izay mandrara ny fifanakalozana tapakila na famerenam-bola raha tsy ny karazan'orinasa manana tapakilan'ny lalamby. Na dia mbola misy tranokala ahafahanao mivarotra ny tapakila faharoa amin'ny olona, Tsy mamela ny varotra tapakila faharoa ny CFL. Ahoana no fomba hanampianao vola hitehirizana vola? Mandidio ny tapakilao rehefa azonao antoka ny fandaharam-potoanao dia hamonjy anao tsy hamandrika tapakila iray indroa satria nisy zavatra tonga ary tsy azonao ampiasaina ilay tapakila novidiana tany am-boalohany.
isa 4: Vidio ny tapakilan'ny CFL amin'ny Save A Train
Save a Train dia manana ny lehibe indrindra, ny tsara indrindra, sy ny tapakila mora indrindra ho an'ny tapakilan'ny lamasinina any Eropa. Ny fifandraisantsika tsara amin'ireo mpandraharaha ny lalamby maro, izay loharanom-bola amin'ny tapakilan'ny lamasinina, ary ny fahalalantsika ny algorithma teknolojia tafiditra amin'izany, omeo anay ny fidirana amin'ny fifanarahana tapakilan'ny fiaran-dalamby mora indrindra. Tsy manolotra tolotra tapakilan'ny lamasinina mora ho an'ny CFL fotsiny izahay; manome toy izany koa izahay ho an'ny safidy hafa mankany CFL.
Luxembourg mankany Colmar Train Prices
Ohatrinona ny vidin'ny tapakila CFL?
fitateram-bahoaka ao anatin'ny Grand Douchy any Luxembourg indraindray dia afaka ary indraindray tsy, miankina amin'ny làlana ary raha olom-pirenena ianao. na izany aza, 1kilasy st amin'ny lamasinina CFL, mandany vola foana, fa izy ireo koa tsy safidy lafo vidy. Ny tapakilan'ny lamasinina CFL dia manomboka amin'ny € 3 ka hatramin'ny 6 € ho an'ny dia lamasinina tokana. ny vidin'ny tapakila fiaran-dalamby CFL Miankina amin'ny karazana tapakila fidianao ary rehefa misafidy ny handeha ianao:
Fotoana fohy € 3
Ticket andro € 6
Lalana fitsangatsanganana: Fa maninona no tsara kokoa ny mampiasa lamasinina CFL, ary tsy mandeha amin'ny fiaramanidina
1) Tonga ao amin'ny City Center foana ianao. Tombony iray amin'ny fiaran-dalamby CFL raha ampitahaina amin'ny fiaramanidina. Fiaran-dalamby CFL sy ny rehetra fitsangatsanganana lamasinina hafa manomboka amin'ny toerana rehetra ao an-tanàna ka hatrany afovoan'ny tanàna manaraka. Izy io dia mamonjy fotoana sy ny vidin'ny taksiam-piaramanidina avy any amin'ny seranam-piaramanidina mankany afovoan-tanàna. Mijanona ny fiaran-dalamby, moramora kokoa ny mankany amin'ny toerana mankamin'ny tanàna alehanao. Tsy maninona na aiza na aiza ianao, Bruxelles, Nancy, Paris, na Amsterdam, fijanonana afovoan-tanàna no tombony lehibe amin'ny fiaran-dalamby CFL! Ohatra, Seranam-piaramanidina Luxembourg dia 20 minitra miala ny afovoan-tanàna.
2) Ny fitsangatsanganana fiaramanidina dia mitaky anao eny amin'ny seranam-piaramanidina farafaharatsiny 2 ora mialoha ny fotoanan'ny sidinao. Tsy maintsy mandinika fisavana ianao alohan'ny hamela anao hiditra ao amin'ilay fiaramanidina. Miaraka amin'ny lamasinina CFL, mila mijanona eo amin'ny fiantsonana kely noho ny fotsiny ianao 30 minitra mialoha. Rehefa dinihinao koa ny fotoana ilana anao hidirana eny amin'ny seranam-piaramanidina mankany afovoan-tanàna, ho tsapanao fa ny fiaran-dalamby CFL dia tsara kokoa ao fe-potoana fe-potoana fitetezana tanteraka.
3) Ny tapakilan'ny lamasinina CFL dia mora na dia ampitahanao amin'ny tapakila aza. Ary, rehefa mampitaha ny fiampangana rehetra voarohirohy, Ny tapakilan'ny fiaran-dalamby CFL dia manana fifanarahana vidiny tsara kokoa aza. Miaraka amin'ny vidin-javatra hafa toy ny saram-bidy izay tsy andoavanao vola amin'ny lamasinina, mandeha amin'ny CFL no tsara indrindra.
4) Ny lamasinina dia mety amin'ny tontolo iainana. Raha ampitahaina amin'ny fiaran-dalamby sy fiaramanidina, fiarandalamby dia hivoaka eo amboniny foana. Mandoto ny rivotra ny fiaramanidina amin'ny alàlan'ny karbonina avo lenta. Ny fiaran-dalamby dia mampitaha Karbaona 20x latsaka fa ny fiaramanidina.
Inona avy ireo fahasamihafana misy eo amin'ny Fotoana fohy, ary tapakila andro amin'ny CFL?
CFL dia manana karazana tapakila isan-karazany amin'ny teti-bola sy faharetan'ny dia: na asa io na fialam-boly. Azonao antoka fa ny iray amin'ireto tapakila ireto dia mety amin'ny fitsangatsanganana kilasy faha-1 hamakivaky an'i Luxembourg amin'ny lamasinina nasionaly CFL.
Tapakilan CFL vetivety:
Ny tapakila fotoana fohy dia manan-kery ho an'ny kilasy 1 voalohany ihany 2 ora manomboka amin'ny fotoana fanamarinana. Azonao atao ny mivezivezy amin'ny tamba-jotra fiaran-dalamby CFL tsy misy fetrany fa raiso ny kajy ny ora hahatongavan'ny lamasinina mankany amin'ny toerana alehany, araka ny fandaharam-potoana. Raha toa ka tsy maintsy mandeha mizaha fiantsoana fohy, tokony hahazo io tapakila io ianao. Tsy voafetra amin'ny lamasinina manokana ianao, ary navela hisafidy ny fifandraisanao ianao.
CFL Tapakilan'ny andro:
Ny tapakila CFL Day dia tapakila kilasy faha-1 maharitra maharitra, ary manan-kery izy ireo manomboka amin'ny fotoana namoahana ny olana mandra-pahatongan'ny 4 ny ampitso. Azonao atao ny mividy ny tapakilan'ny fiaran-dalamby CFL Day amin'ny milina tapakila, birao tapakila, na Mitsitsia lamasinina.
Misy famandrihana CFL ve?
fitateram-bahoaka, ao anatin'izany ny serivisy fiaran-dalamby CFL voafantina, ao anatin'ny Luxembourg, Maimaimpoana. Ary noho izany, tsy ilaina ny fisoratana anarana CFL, raha tsy tianao ny mandeha kilasy 1ème. Olom-pirenena Luxembourg izay matetika mamakivaky sisintany mankany Frantsa, afaka mankafy Flexway 1ère kilasy pass, HO AN'NY 85 €. Ankoatry ny, Ny olom-pirenena Luxembourg dia afaka mankafy sarany ambany amin'ny tapakila isam-bolana mankany Alemana. Ka aiza no ahafahanao mahazo fampahalalana fanampiny momba an'io?
– Kaontera tapakila CFL.
– Amin'ny telefaona serivisy ho an'ny mpanjifa CFL 2489 2489
Hafiriana alohan'ny fiaingan'ny CFL dia mila tonga aho?
Sarotra ny milaza marina amin'ny faharoa, fa Save a Train dia manoro hevitra ny hahatongavanao 30 minitra alohan'ny fotoana hiainganao. Miaraka amin'ity fe-potoana ity, hanana fotoana ampy koa ianao hiantsenana ny zavatra ilainao manao ny dianao lamasinina mora araka izay azo atao.
Inona ny fandaharam-potoanan'ny lamasinina CFL?
Luxembourg mankany Cologne Train Prices
Luxembourg mankany Koblenz Train Prices
Iza amin'ireo gara no aroson'ny CFL?
Ny gara Luxembourg an'ny CFL dia mijanona ao amin'ny Place de la Gare izay eo afovoan-tanàna.
Any Troisvierges, Fiaran-dalamby CFL miala ary tonga ao amin'ny gara Troisvierges miorina amin'ny zotra 10, mampifandray ny tanànan'i Luksemburg amin'ny avaratry ny firenena. Troisvierges dia fonenan'ny roa amin'ireo havoana avo indrindra any Luxembourg.
Miala koa ny fiaran-dalamby CFL ary tonga ao amin'ny tanànan'i Nancy any Frantsa. Ny lamasinina CFL dia miainga avy eo amin'ny gara Central Luxembourg mankany Nancy 1 ora.
Azonao atao ny mahita ny Flanders any Belzika amin'ny alàlan'ny lamasinina avy any Luxembourg mankany Ghent sy / na Bruxelles. Miala isaky ny ora ny fiaran-dalamby CFL avy any Luxembourg mankany amin'ireo tanàna mahagaga an'i Belzika ary Tanàna Tranainy mahafinaritra any Eropa.
Afa-kevitry ny basikety ve ny bisikileta? Fiaran-dalamby CFL?
Avela handeha bisikileta maimaimpoana ny bisikileta CFL, ary raha mbola mitahiry azy ireo amin'ny toerana voatokana ho an'ny bisikileta ianao. Azonao atao ny mahita ireo bisikileta mitahiry toerana amin'ny alàlan'ny marika maitso eo am-baravaran'ny CFL.
Mivezivezy maimaimpoana amin'ny lamasinina CFL ve ny ankizy?
Eny, fa hatramin'ny taonan'ny 12 taona. Ankizy mbola kely noho 12 taona, afaka mandeha maimaim-poana raha miaraka amin'ny olona antitra noho ny taonany izy ireo 12, miaraka amina tapakila sy kara-panondro marina.
Nahazo alalana amin'ny fiaran-dalamby CFL ireo biby fiompy?
Eny, CFL dia tia alika amin'ny habe rehetra sy ireo 4 afaka mandeha maimaim-poana amin'ny lamasinina CFL ny olombelona tongotra. Ny alika dia tsy maintsy mitarika ary tsy mahazo mipetraka eo amin'ny seza.
Inona avy ireo fomba fiasa amin'ny CFL?
Ny mpandeha rehetra dia tsy maintsy mampiseho tapakila sy kara-panondro mety. Raha very ny tapakilan'ny fiaran-dalamby na maika, ary tsy nividy tapakila mialoha, azonao atao izany amin'ny lamasinina, avy amin'ny solontenan'ny CFL.
CFL FAQ be fangatahana indrindra – Mila manafatra seza mialoha ve aho amin'ny CFL?
tsy misy, tsy misy famandrihana seza amin'ny lamasinina nasionaly na iraisam-pirenena CFL, mipetraka amin'ny toerana malalaka anananao ianao, ary hanana toerana malalaka foana ianao raha mividy tapakilan'ny lamasinina mialoha.
Misy Internet Wi-Fi amin'ny lamasinina CFL?
tsy misy. Azonao atao ny mifaly Internet Wi-Fi maimaim-poana amin'ny gara fiantsonan'ny CFL voafantina, fa tsy misy Wi-Fi amin'ny lamasinina CFL.
Luxembourg mankany Ettelbruck Train Prices
Ettelbruck mankany amin'ny vidin'ny fiaran-dalamby Junglinster
Vidin'ny lamasinina Mersch mankany Luxembourg
Clervaux mankany amin'ny vidin'ny fiaran-dalamby any Luxembourg
Raha efa namaky hatreto ianao, fantatrao izay rehetra tokony ho fantatrao momba ny lamasinina CFL ary vonona ny hividy ny tapakilan'ny fiaran-dalamby CFL ho an'ny dianao ho avy Save A Train.
Te hampidirina amn'ny tranokalanao ity pejy ity? kitiho eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftrain-cfl%2F%0A%3Flang%3Dmg – (Ampidino nidina hamangy ny Embed Code), Na azonao atao rohy mivantana ao amin'ity pejy ity.